संकटकालका अनुभव र शिक्षाहरू - नागरिक रैबार
समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि राज्यले चाल्नुपर्ने शृंखलाबद्ध कदमहरू
प्रतीकात्मक चित्र । सटरस्टक सूर्यप्रसाद गैह्रे ‘पारस’
मानिस मरेर घाट पुगेका बेला धेरै मलामीहरूको मुखबाट सुनिन्छ, ‘जीवन यस्तै त हो, एक दिन यहीँ आउनुपर्छ । लोभ, पाप र घमण्डको भकारी बोक्न जरुरी छैन । आखिर मरेर जाँदा लानु केही छैन ।’
मलामीहरूले घाटमा गुजारेको केही समयपछि नै आ–आफ्नो प्रवृत्ति बोकेर फेरि जीवनको पुरानै लयमा फर्कन्छन् । समाज उस्तै रहन्छ, बदलिँदैन । तर फेरि अर्को मृत्युमा घाट पुग्दा उस्तै विचार तिनै मलामीले पोख्छन् । यो समाजमा पुनरावृत्ति भइरहने तर कार्यान्वयन हुन नसकेको एउटा जीवित विचार हो ।
इतिहासमा ठूला आन्दोलन र युद्धमार्फत वातावरण तयार गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ संविधान जारी गरी अहिले हामी स्थिर अर्थराजनीतिक मार्गमा छौँ । स्थिर राजनीतिक निकास नभएको तर्क गरी गतिविधि सञ्चालन गर्ने दल वा समूह पनि सक्रिय भइरहेका छन् ।
जेहोस्, अहिलेको व्यवस्था निर्माण गर्न वामपन्थी तथा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण र अन्य धेरै प्रकारका राजनीतिक, व्यवस्था, न्याय प्रणालीलगायतका विषयमा पनि व्यापक ध्रुवीकरण तथा बहस गरेर मात्रै हामीले विद्यमान व्यवस्था हाँक्ने नयाँ संविधान प्राप्त गरेका हौँ ।
वास्तवमा समाजको युगान्तकारी परिवर्तन गर्ने कागजी संविधान वा कानुनले भन्दा पनि दृढ संकल्पित, गतिशील दृष्टिकोण, व्यापक इच्छाशक्ति र आम जनविश्वास प्राप्त गरेको नेतृत्व जरुरी हुने रहेछ । हामीले विश्वका कैँयन् मुलुकमा देखेका छौँ, तानाशाहले पनि देश विकास गरेका छन् भने लोकतन्त्रवादीले मुलुकलाई तन्नम बनाएर राखेका छन् । हामीले ७० वर्षको समय मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि खर्च गर्‍यौँ र अहिले संवैधानिक रूपमा त्यसलाई लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढेका छौँ । हामीसँग यतिवेला गतिशील संविधान र जनमत प्राप्त आवधिक सरकार छ ।
सरकारको आलोचना र समर्थनको पाटो कायमै छ । सत्ता सञ्चालनलाई हेर्ने आ–आफ्नै प्रकारको दृष्टिकोण र स्वतन्त्रता हामी सबैमा छ, यो नै हामीले संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर हाम्रो समाजले व्यवस्था परिवर्तन, समृद्धि वा अधिकारको आधारभूत तहबाट फेरि पनि सवाल उठान गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले आज नै हाम्रो आवधिक समयमा अनिवार्य प्रगति गर्नुपर्छ, अन्यथा खाली शब्द र वाक्यांश मात्रै प्राप्त हुने तर्कहरूलाई भोलिको पुस्ताले स्वीकार्ने छैन ।
सत्ता स्वार्थसँग विषय बाझिएर असम्भव तर्क र कुतर्क गरिरहेकाहरूले के भनिरहेका छन् भन्ने विषय छाडौँ । तर आवधिक सरकारले २ वर्ष बढीको समय पार गर्दा अनिवार्य गर्नुपर्ने केही आधारभूत पाटो छुटेको आभास हुन थालेको छ, जसलाई अब सच्याउन जरुरी छ ।
विगतका आन्दोलनले उठान गरेका आधारभूत सवाल र हाम्रो समाजमा प्रकृति एवं मानवीय तवरले सिर्जना गरेको संकटले दिएको शिक्षा कतै हामीले ग्रहण गर्ने कुरामा चुकिरहेका त छैनौँ ? संविधान हामीले नै निर्माण गरेको चलायमान दस्तावेज हो । त्यसमा पनि राज्यव्यवस्था समाजवादउन्मुख भनिएकाले कम्युनिस्ट सरकारका लागि राष्ट्र र जनताको पक्षमा नतिजामुखी काम गर्नका निम्ति सुनौलो अवसर बनेको छ । त्यसैले सरकारले अगाडि बढाएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को कार्यक्रमलाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्न र पूर्ण एवं मूर्त स्थिर व्यवस्थाका लागि संकटले दिएको शिक्षालाई अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
संकट र शिक्षा
महाभूकम्प र शिक्षा : हामीले ५ वर्षअगाडि ०७२ मा महाभूकम्पको अनुभव गर्‍यौँ, जसमा मानवीय र भौतिक दुवै पक्षमा ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । सरकारले मानवीय र भौतिक रूपमा क्षति बेहोरेका घरपरिवारलाई वर्गीकरण गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा बाँकी रहेका कामलाई पूर्णता दिने हेतुले तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ ।
विशेषगरी भूकम्पले इपिसेन्टरको प्रभावित कमजोर भौगोलिक बनावट भएका क्षेत्र र कमजोर ढंगले निर्माण गरिएका एवं पुराना भएका आवासीय तथा भौतिक संरचनामा बढी क्षति पुर्‍यायो । त्यो भूकम्प हाम्रा लागि एउटा ठूलो संकटको रूपमा प्रकट भएको थियो । तर प्रकृतिको आफ्नै नियमित गतिको क्रममा भविष्यमा फेरि पनि ठूलो भूकम्प हामीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
भूकम्पको आलो घाउका बेला राजनीतिकवृत्तदेखि चियापसलसम्म आवासीय क्षेत्र र भवनलगायतका संरचना निर्माणसम्बन्धी नयाँ नीति एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रसंगले छलफलमा व्यापकता पायो । भविष्यमा हुन सक्ने सोही प्रकारको दुर्घटनाबाट वच्न हामीले उक्त घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्ने आवाजले महत्त्व पायो । तर समयक्रमसँगै सबै क्षेत्रले सो विषयलाई बिर्संदै गए र आज निर्माणका क्षेत्रमा सबैको मनोविज्ञान र व्यवहार फेरि पुरानै देखिएको छ ।
पैसाले शिक्षाको गुणस्तरीयता तोकिने भएकाले नै राम्रा सरकारी विद्यालयहरू पनि ओझेल परेका छन् । तपाईं–हामी स्वयंले महँगा र विदेशी आबद्धता भएका विद्यालय नै खोज्छौँ
देशका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका बस्तीहरू भूगोलमाथिको वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा बसाइएका होइनन्, मानिसको बस्ती विकास क्रममा आफ्नै प्रकारले संयोगवश बन्न पुगेका हुन् । आवधिक सरकारले सबै जनताको सुरक्षित आवासको दायित्व लिनुपर्छ र सोहीअनुरूपको नीति तथा कार्यक्रम तय गरिनुपर्छ भन्ने शिक्षा महाभूकम्पले हामीलाई दिएर गएको छ । उदार बजार नीतिको नाममा सीमित दलालहरूले आवासीय क्षेत्र निर्माण गर्ने र वैयक्तिक सम्पत्तिको स्वतन्त्र उपभोगको नाममा असुरक्षित भूमिमा आवास संरचना निर्माण गर्ने विषयमाथि राज्यको ध्यान जानु जरुरी देखिएको छ ।
भविष्यमा देशमा आइपर्न सक्ने महाभूकम्पबाट क्षति कम गर्नका लागि सरकारले आवासीय क्षेत्रको निर्धारण, आवासीय संरचना एवं अन्य भौतिक संरचना निर्माणका निम्ति स्पष्ट नीति र कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
निजी आवासीय क्षेत्रको निर्माणमा सरकारले उदारवादमा आधारित होइन, राज्यको दायित्वमा आधारित नयाँ नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । सरकारले विगतको निरन्तरताबाहेक यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन । भोलि आइपर्ने महाभूकम्पको संकटबाट जोगिन सरकारले भोलि होइन, आजबाट सो सम्बन्धमा नीति तथा कार्यक्रमको क्षेत्रमा पहलु लिन आवश्यक छ । यसले गर्दा सुरक्षित आवासविहीन नागरिक पनि देशमा हुने छैनन् ।
नाकाबन्दी र शिक्षा : भूकम्पको घाउसँगै फेरि हामीले भारतीय नाकाबन्दी बेहोर्‍यौँ । नाकाबन्दीले नेपाली समाजमा ठूलो अभावको सिर्जना गर्‍यो । तत्कालीन समयको सरकारले नाकाबन्दी फुकुवाका लागि भारतसँग नझुक्ने घोषणा गरेको विषयले निकै जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो ।
तनहुँमा एक हजार घरमा बत्ती बाल्ने तयारी
कांग्रेसमा महाधिवेशन सार्ने र कार्यसमितिको म्याद थप्ने तयारी
✍धनु विश्वकर्मा। संस्कार र संरचनामाथिको प्रश्न? समाज र स्वअस्तित्वमाथिको प्रश्न? इज्जत र यौनमाथिको प्रश्न? नर र नारीमाथिको प्रश्न? अहो! प्रश्नै प्रश्नमाथिको रथयात्रामा सवार छन् महिलाहरू। नारी सृष्टिकर्ता हुन्। नारी सिङ्गो मानव जातिको कोमल सर्जक हुन्। नारी संसारकै सुन्दर गहना हुन्। नर भएरै नारी र नारी भएरै नर हो। महिला र पुरुष एक रथको दुई पाङ्ग्रा […]
“सिकाइको वैकल्पिक बिधिको औचित्यता“
विश्वमा कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को त्रास कहिले सकिन्छ भन्ने कुरामा अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । नेपाल सारा विश्वबाट टाढा रहन सक्ने सम्भावना पनि छैन र थिएन पनि । गत मँसिर महिनामा चिनबाट शुरु भएको कोरोना महामारी अहिले बिश्वभर फैलिसकेको छ । लाखौ मानिसहरुको मृत्यु भैसकेको छ । अझ पनि विश्वका कतिपय मुलुकमा यसको प्रभाव […]
समय २०७७ सालमा आइपुग्नु तर नेतृत्व २०४६ सालकै वरिपरि घुमिबस्नु नै नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय अन्तरविरोध हो । यसको अर्थ हुन्छ, हाम्रो राजनीति र युगचेतनाको पुस्तान्तर तीस वर्षभन्दा धेरै छ । नेपाली राजनीतिको पहिलो पुस्ता आज भुत्ते र अर्थहीन भएको छ । आफ्नो कालखण्डमा यसले त्याग र संघर्ष गरेको थियो । तर दोस्रो पुस्ता ? योसँग […]
कोरोनापछि कस्तो शिक्षा ?
विद्यालयमा पढाइएका कुरा मात्र सत्य र घरका वा स्थानीय सीप र प्रविधि बेकामे हुने भन्ने भ्रम हटाएर परम्परागत ज्ञान र सीपको सम्मान हुने दिशामा अबको शिक्षालाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । कोरोना महामारीका कारण पाँच महिनासम्म विद्यार्थीहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित भए। विद्यार्थीहरू यति लामो समयसम्म शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट वञ्चित रहँदा आम जनमानसमा डर र चिन्ता थपियो। सरकारले […]
‘पूर्ण स्वास्थ्यका लागि मानसिक स्वास्थ्य अपरिहार्य’
मानसिक स्वास्थ्य के हो ? र यसको पनि शारीरिक स्वास्थ्यको जस्तै महत्व हुन्छ भन्ने कुरा हामीमध्ये कतिलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ। कारण आफू नमरी स्वर्ग देखिँदैन भनेझै कतिपय मानिसहरुलाई आफूले अनुभव नगरी थाहा नहुने कुरा पनि सामान्य हो। स्वास्थ्यका सवालमा मानसिक र शारीरिक पक्षले बराबर महत्व राख्दछ। यस्ता पक्षमा आम मानिसहरु सुसुचित हुन अत्यावश्यक हुन्छ। […]
‘हुँदा खाने’ अनि ‘हुनेखाने’ले माया साटेको देखेर मर्न पाऊँ !
विचार । त्यो समय, पहुँचमा भएका मुर्खहरुले जातको रंग भरिदिए। जन्मदै गरेको एउटा भगवान (बालक)लाई उसका पुर्खाको जातसँग जोडेर उच्च–निच्च विभाजन गरे। तल्लो जातका व्यक्तिसँग आफ्नो स्वार्थ अनुसारको शारीरिक शोषण चल्ने भयो। उनीहरुले बनाएका औजार र हातहतियार चल्ने भए। उनीहरुले सिलाएको लुगा लगाइयो। उनीहरुले कला भरेका गहनाहरु झन् विशेष भए। अर्थात्, प्रत्यक्ष रुपमा श्रम, सीप […]